Vonona hisedra ny zavatra rehetra ny tia tanindrazana : na maty, na migadra, na hitondra firenena ! – MyDago.com aime Madagascar
Magro 25 Martsa 11
Ny mpitarika ny Tokobetelo, Atoa Tsianihy dia nilaza fa ireo porofo manamarina fa ho avy i Dada sy tonton avy any Paris (Didier Ratsiraka io). Mbola tsy mitohy ny fifampidinihina ary tsy misy manakana izany fiverenana izany hoy izy. Nanambara ihany fa mifanipy hoditr’akondro Ambohitsirohitra sy Tsimbazaza ary mifanao totohondry mihitsy. Toy ny mahazatra moa dia nitaky ny famoahana an’i Mamy Rakotoarivelo ihany koa izy ary nomarihany fa raha mihoatra ny 31 martsa izany dia hisy zavatra hitranga.
Mahakasika ny fananganana ilay governemanta vaovaon’i FAT dia nilaza i Ignace fa lasa fitadiavan’asa sisa izany.Raha very asa, tongava eny Mahazoarivo manao ministra raha te hahazo seza CT sy CST ihany koa hoy ity solontenan’i Moramanga ity.
Namaky bantsilana ny vaovao aely handotoana ny orinasa Tiko indray kosa i Manoela fa ny TIKO irery no sahy nampiasa malagasy marobe indrindra. Tsy manao trafika girofle izany ny TIKO fa i Roland Ratsiraka sy ny ministry ny vola no mibaiko ny TIKO ankehitrin hoy hatrany i Manoela. Mahakasika ilay sori-dalan’i Dr Simao dia nilaza izy fa tsy manaiky ilay « feuille de route » ny SADC ary tany Kilemona ambanivohitry Maputo no nihoana ny delegasiona FAT sy Simao ary tsy mety mandray azy ireo ny Troïka.
Ny fananganana tetezamita iraisana tena izy marina dia mamerina an-dRavalomanana sy Radidy hoy i Mektoub. Efa vonona hisedra ny zavatra rehetra ny tia tanindrazana ka na maty, na migadra, namitondra firenena hoy izy.
I Zafilahy Stanislas indray dia nanambara fa tsy ny vola no hanajamba ny masony ka hanatevatevana ny filoha Ravalomanana. Rehefa miverina ny ara-dalàna afaka mitady vola tsara fa tanindrazana aloha izao no avotana hoy izy. Ho tsarovantsika ny razambentsika ary efa noraisintsika ny fanilo mba tsy ny hafa no hanjaka eto amin’ny firenena, afo miampita io.
Nilaza ny fandaharam-potoana ny 29 marsa izao koa Rakotomandimby Zafilahy, ny hariva isika no hanamarika io daty io ka amin’ny 1 ora sy sasany eny Ambohijatovo hanatitra voninkazo sy hihira eny amin’ny tsangabaton’ny Maherifo. Ho avy eny koa ny lehibe sy ny namana vaovao, avy eo dia mandeha tsimoramora ety amin’ny Magro mihaino kabary hoy izy.
Hifanome fotoana indray moa ny ankolafy telo rahampitso ary nampanantena ny filoha Zafy Albert fa hampita hafatra mafonja rahampitso.
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 25/03/2011 (1/3), miisa 10.
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 25/03/2011 (2/3), miisa 10.
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 25/03/2011 (3/3), miisa 10.
Auteur Solo RazafyPublié le 26 mars 2011 Catégories Magro, Malagasy, Politique
5 réflexions sur « Vonona hisedra ny zavatra rehetra ny tia tanindrazana : na maty, na migadra, na hitondra firenena ! »
Mibaribary fa mampiady foko ankehitriny ny FAT !
– Nahoana i Zafilahy sy Manoela no tsy misy mikasikasika nefa nigadra niaraka tamin’i Fetison AR ?
– Nahoana no tsy sahy migadra an’i Pr Albert ZAFY ?
– Nahoana i Mamy Rakotoarivelo irery no sahy nogadraina amin’ny zavatra tsy nahitàna hanapotehina azy ?
– Nahoana ny vadin’i Mamy Rakotoarivelo no nosamborina tsy amin’antony ?
– Nahoana no nampijaliana ny zanany
– Nahoana no nampijaliana sy nogadraina i Misa sy ny namany ?
– Ialahy indray io r’i Eugene Voninhitsy ? Sa Zakahely Boniface ?
Tena adi-poko izao ka tsy rariny, ary tena fahambanian-tsaina efa lomorina !
Tsy ho ekena izany amin’ny 29 Marsa !
-Ka tianao va ?
Ny hiaraka amin’nahy !
26 mars 2011 à 11 h 07 min
Manouela : any aminareo ny ady any Toliara
Jaojaoby any Diego
Antsirabe-Ambatondrazaka- Toamasina-Fianar-Faradofay:omeo azy ny an’i Mémé e !Morondava- ……………………………………………………..
Samia tonga daholo, fa antsika jiaby Madagasikara e !
Zakhooo dit :
Ndeha hahitsy fijery. Nisy namana nandefa mail de nilaza fa ny 29 mars dia hitakiana ny fiverenan’ny Ra8, tetezamita hiombonana, famoahana gadra politika, fandefasana Radio Fahazavana sy ny hoe fifidianana madio.
Hazavaonareo mahay azy fa fanina ny kely saina: toa ireo ihany ange le voatanisa tao am lay FdR teny Ivato e !saingy am teny frantsay. Iray izay.
Faharoa dia izao: mila fitoniana ara politika ny fiverenan-dRa8 eto. Dia indro i Zafy sy Ratsiraka sy ny sasany mitarika olona ho etsy sy eroa. Dia hilamina ve ny tany? nefa efa fantatra ny fitiavan’ireo an-dRa8.
Fahatelo: ref tsy milamina ny tany dia mihalava ny andron-dRajoelina dia lazaina Ra8 fa handefaso sôsy hanaovana mobilisation. Dia matavy ny vorona.
Fahaefatra : dia manaiky daholo ny olona fa mpamadika izay manatona an-dRajoelina kely. Dia tsy lazaina sy hazavaina fa izy efa manao propagandy mamono ny fitiavan-‘ny olona an-dRa8. Dia mihalava ny teteamita fa ianao sady mahia no mitofezaka fa i andry matavy sy milamina. Dia rahoviana izany vao hisy sahy hanohitra an’i andry mivantana ka tsy ho lazaina ho mpamadika.
Fehiny : korontany ny tànana tsy hilamina mba tsy hiverenan-dRa8 am zay afaka mangataka vola foana ireo avara-patana sy hahalava ny fitondran’i andry am zay afaka mikalobana ka aleo ireo olona manantena tsy misy ireo hihanan….tsy fantatra.
Dia samy velon’aina ho tsarain’ny zanany eo…..
26 mars 2011 à 15 h 54 min
quid de l’a
révolte ou soumision?
faire comme les juifs de Varsovie pendant la 2° guerre mondiale ?
tendre l’autre joue ou poser sa tête sur le billard de l’échafaud?
cela a un qualificatif……que je ne prononcerai par charité chrétienne face à la misère morale et intellectuelle.
Nul n’a le droit d’avoir des certitudes face à un peuple qui souffre.
un peuple à qui les forces économiques extérieures enlèvent le bonheur d’exister dignement.
Précédent Article précédent : Avoahay ny gadra politika rehetra, aleo hiverina ny sesin-tany politika hoy ny vehivavy sy ny tanora TIM
Suivant Article suivant : Quel avenir ?